पीएम कप राष्ट्रिय टी–ट्वान्टी क्रिकेट : लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो जित « News24 : Premium News Channel
पीएम कप राष्ट्रिय टी–ट्वान्टी क्रिकेट : लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो जित
काठमाडौं । पीएम कप राष्ट्रिय टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशले पहिलो जित दर्ता गरेको छ । समूह ‘बी’ अन्तर्गत टीयू क्रिकेट मैदानमा प्रदेश नं. २ लाई ४२ रनले पराजित गर्दै लुम्बिनीले पहिलो जित दर्ता गरेको हो ।
खेलमा १ सय ६२ रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश २ ले निर्धारित २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १ सय १९ रनमात्र जोड्न सक्यो । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको लुम्बिनीले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १ सय ६१ रन जोडेको थियो ।
त्यस्तै विहीबार नै सुदूरपश्चिम प्रदेशले पहिलो जित दर्ता गरेको छ । समूह ‘ए’ अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा कर्णाली प्रदेशलाई ४७ रनले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले जित निकालेको हो ।
खेलमा सुदुरपश्चिमले दिएको १ सय ५४ रनको चुनौती पछ्याउने क्रममा कर्णाली १९ दशमलब १ ओभरमा अलआउट हुदै मात्र १ सय ६ रन जोड्न सक्यो । यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउदै १ सय ५३ रन जोड्यो ।
त्यस्तै बिहीबार नै भएको अर्को खेलमा एपीएफ क्लबले लगातार तेस्रो जित दर्ता गर्न सफल भयो । समूह ‘बी’ अन्तर्गत मुलपानी क्रिकेट मैदानमा गण्डकीलाई दुई रनले पराजित गर्दै एपीएफले तेस्रो जित दर्ता गरेको हो । ९३ रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर मात्र ९० रन बनाउन सक्यो ।
यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले १८ दशमलब ४ ओभरमा अलआउट हुदै ९२ रन जोड्यो । यसैबीच मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुने भनिएको त्रिभुवन आर्मी क्लब र प्रदेश नं. १ बीचको खेल मैदान भिजेका कारण हुन सकेन ।